/Blog/Testolone/Thenga i-Potolone powder for building body: iziphumo ze-RAD140 kufuneka wazi!
ezaposwa ngomhla 02 / 07 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Testolone.
I-RAD140 (Testolone) ividiyo ye powder
|. I-RAD140 (Testolone) epholileyo Abalinganiswa basisiseko:
igama: RAD140 / Testolone
I-molecular Formula: C20H16CIN5O2
Isisindo somzimba: 393.826
Xa sathetha Sarms, ngokwenene iimveliso ezilungileyo xa usakha ukwakha umzimba, ewe, ziyimpahla yokwakha umzimba. Namhla esiye sathetha ngayo ngenye yezinto ezithengiswayo eziphezulu zokuthengisa i-sarm-Testolone powder, kwaye uqonde ukuba kutheni abantu baninzi befuna bathenge iPololone powder kuba abanxibe impahla.
I-Testolone (RAD140) inkcazo
I-testolone powder, ngokuqhelekileyo ibizwa ngokuba yi-RAD140 powder, yinto entsha esakhiweyo kwintsapho ye-androgen receptor-modulators ekhethiweyo, okanye njengoko ziyaziwa ngakumbi - iiSARMS. Ngako oko, inzuzo enkulu kakhulu kwi-anabolic steroids kukuba inika iziphumo ezifanayo ezilungileyo, kungabikho nayiphi na imiphumo emibi. Enyanisweni, oku kuyinkalo ekhethekileyo, nangona xa kuthelekiswa namanye amaSARMS, njengenye ye-SARM ezitsha ezikhoyo. I-RAD 140 iboniswe ukwandisa ukunyamezela kunye nesantya kunye namandla. Ikwaxhasa kwakhona ukukhuliswa kwamascle nokuphucula, kamva siya kuhlolisisa iinkalo ezithandekayo zeRAD140.
Yintoni iPowolone powder?
Njengokuba sathetha kwelinye iinqununu, i-Testolone powder, luhlobo lwe-crystal emhlophe. Njengoko i-Testolone, i-Testolone bulk powder enye yokuthengiswa okutshisayo phakathi kweearms, kungekhona nje ngenxa yeendleko ze-Testolone, kodwa kwakhona ukuhlambuluka I-Testolone eluhlaza, ewe, ukuba ndithenga i-powolon bulk powder yokuthengisa, okanye i-labor use, ndikhetha ukuthenga i-Testolone eluhlaza kwi-intanethi, khetha umthengisi othembekileyo we-Testolone kwaye ugcine uxolo oluzinzileyo. AAS njenge:
I-Formula ye-molecular: C20H16CIN5O2
I-Melt Point: 447.57 ° C
Ngaba i-Testolone powder yezomthetho?
Ewe, ukuthenga nokusebenzisa i-Testolone (i-RAD-140) isemthethweni; Nangona kunjalo, ivivinywa ngexesha lemidlalo kunye nemicimbi ethile yokwakha umzimba. Awunakuxhalaba malunga nokubonisa uvavanyo lweziyobisi lwangxowankulu, kodwa ukuba uzama ukuncintisana ngokwemvelo kumboniso wokwakha umzimba, umzekelo, ngoko u-Testolone uya kuqinisekisa ukuba uvavanyo lwakho lubuya luhle.
Ixabiso le-Testolone powder
Nangona bekungekho mpazamo ukuchaza ukuba imveliso ayinakho ngokupheleleyo kwimiphumo emibi, ngaba ngabaphandi kunye nabasebenzisi bokugqibela babonakala bengakhathazeki malunga nemiphumo emibi.
Enye yezinto ezikhangayo kakhulu kwi-RAD140 powder, kunye nazo zonke ii-SARMS ngokubanzi, ukungabikho kwemiphumo emibi, okwenza ezinye zezilwanyana ezinokukhusela ngokukhuselekileyo (PED) kule mihla. Njengoko kuchazwe ngentla, i-RAD140 powder ayiyi kubangela ukuxhatshazwa, kwaye ayiyi kubangela nayiphi na imiphumo emibi echaphazelekayo kwi-steroids. Okona, nangona kubekho izixhobo zomlomo, i-SARMS ayinayo inetyhefu, kwaye kunjalo ne-RAD140 powder. Ekugqibeleni, i-testolone ayisebenzisani ne-enzyme ye-aromatase, ngoko ayiyi kuba nemiphumo emibi ye-estrogenic xa ukuyisebenzisa njenge-PED yodwa, okanye ngezinye izinto ezingekho i-aromatizing compounds.
Iinzuzo zePowolone powder kwi-Bodybuilding
I-testolone powder yokwakha umzimba. Njengoko kuboniswe ngasentla, ngelixa iilingo zezillini kunye nokusetyenziswa kwePerolone powder kunye nezinye ii-SARM ziye zahluleka ukusetyenziswa kwisimo sezokwelapha. Ezi zilingo zijolise ekulungiseni ukulahleka kwemisipha kunye nokuxhatshazwa kwemisipha, kwakunye nokunyanga i-osteoporosis nokukhusela ukulahlekelwa kwethambo olongezelelweyo. Nangona uninzi lweengxelo ezisemthethweni kulezi zihlanganisi azijolisanga ekwakheni umzimba, i-testolone iye yathandwa kakhulu kuluntu lomzimba ukuze lukwazi ukwandisa ubunzima be-muscle ngaphandle kokubangela ukuba kubekho iziphumo ezimbi ezibonakalayo.
Ngokuqhelekileyo, isenzo esikhethwe kwi-androgen receptors kwiisisipha zomzimba sisenza ukwanda kwimizimba yesisundu kunye nokuphucula ukuqeqeshwa koqeqesho. Abanomdla amaninzi baye baqaphela ukuba enye yeenzuzo eziphambili ze-anabolic steroids yinto yokuba avumela abasebenzisi ukuba baqeqeshe rhoqo kunye nexesha elide. Awukwazi ukwandisa uqeqesho lwakho kunye nomthamo kakhulu nge-testolone njengoko unako nge-anabolic steroid. Nangona kunjalo, lo mbandela woxhoba loqeqesho oluphuculweyo lufana nezo zombini iintlobo zeemveliso.
Iimiphumo ze-Testolone powder kwi-Muscle, Bone, Tendons, kunye neLigaments
I-Testolone, ngenxa yempembelelo yayo kwi-androgen receptors, inokunyusa impendulo yomsebenzisi ekuqeqesheni. Oku kuthetha ukuba xa usebenzisa i-regimen yokuqeqeshwa kunye nokutya ngaphandle kwe-testolone uze usebenzise i-regimen efanayo, i-testolone iya kwandisa iziphumo zakho. Zonke ezinye izinto zilingana, uza kubona enye ifom yokutya kunye nokuqeqesha xa udibanisa kunye nomjikelezo oqikelelweyo owenziweyo.
Ngokuqondakalayo, abaninzi abaphucula umzimba bajonge ingqalelo ekukhuselweni kwamathambo e-testolone xa bejonga indlela esinokubanceda ngayo ukuphucula imizimba yabo. Nangona kunjalo, njengamanye amaqumrhu kule klasi, i-testolone inokuphucula amandla amathoni kunye nemigqa. Kuba nabani na oqeqeshe amandla, oku kuyimiphumo ebalulekileyo. Njengabakhi bomzimba benza i-gain size kwisistim kunye namandla, kubalulekile ukuba i-tendon kunye nemigqa ifumana amandla. Nabani na oye wahlushwa i-tendon okanye i-ligament injection eyaziwa ukuba ukuphilisa kunokuba yinkqubo ende. Kwakhona kunokukhokelela ekumonakalisweni ngonaphakade kwaye kunokuthintela kakhulu uqeqesho.
I-Testolone, njengamanye amaninzi ama-SARM, nayo iyanciphisa ukuhlaziywa kwamathambo. Oku kuthetha ukuba iyancipha ukuphuka kwethambo, ezinokunyusa ukwanda kweethambo ngaphezu kwexesha. Enyanisweni, ezininzi zezifundo zeekliniki ze-SARM zijolise ekusebenziseni kwabo ukunyanga i-osteoporosis. Ukwakhiwa komzimba, oku kunika inzuzo yokunciphisa ingozi yokuphulwa komzimba. Izahlulo azikho ukulimala komzimba ngokuqhelekileyo. Kodwa njengokuba kunokulimala kwe-ligament kunye ne-tendon, i-fracture inokukwazi ukubuyisela uqeqesho ngokubanzi. Kukho neenzuzo kubadlali abanomonde. Kwabo benza umlinganiselo ophezulu we-cardio high-impact, ukuxhaswa ngokuqondakalayo kunokunciphisa umngcipheko wokuqhaqhabalalisa uxinzelelo kwi-overuse.
Imiphumo ye-Testolone powder kwiQeqesho noSebenzi
I-Powolone powder inezinzuzo ezininzi ngokubhekiselele ekunyuseni isivinini kunye namandla. Ekubonweni kokuqala, kunokubonakala ngathi le nto ayinandaba nokwakha umzimba. Kodwa ukwanda kwamandla kunye nokunyamezela kunokunceda ukuxhasa ukwanda koqeqesho. Oku kunceda abo baqeqeshwa kwiikhalori ezincitshisiweyo ngexesha lokunqunyulwa. I-Testolone inokunceda abasebenzisi ukugcina ubunzima be-muscle obukhoyo ngelixa beka. Ukuhlanganiswa kwezi mpawu kwenza kube ngumbono wokwakha umzimba kwisigaba sokusika.
Oku kuncedisa ukuxhasa ukuveliswa kwamandla okutshabalalisa nakho kunakho ukukhupha umzimba. Ngokuqhelekileyo kuqondwa ukuba ukuqeqeshwa kwexesha elide, okanye i-HIIT, kukhokelela ekulahlekelweni kwamanqatha amaninzi ngexesha elingaphantsi xa lifaniswa ne-cardio-state state. Uqeqesho lwe-HIIT luthembela ekugqibeleni kwamandla. Kwakhona kungalondoloza umsila okhoyo ngokugqithiseleyo kunokuba uqeqeshe uqeqesho olusemgangathweni. Ngaloo ndlela, amandla ovavanyo lwe-testolone ukuxhasa amandla okuqhuma angaphucula umgangatho we-HIIT uqeqesho, okukhokelela ekulahlekelweni kweoli kunye nokulondolozwa kangcono kwemisipha.
Ewe, amandla okuqhuma nawo afunekayo ekuqeqesheni amandla ngokwalo. Ingaba ufuna ukutshintshisa inqaku lokunamathela kwi-bench press okanye usebenzela ukufumana impendulo yokugqibela kwisethi sakho sokugqibela sama-OHP, ukuba unamandla okugcina amandla okusebenzisa amandla xa uphuphayo luxabisekileyo xa ufuna ukuqeqesha nzima mhlawumbi unakho.
Nangona igalelo layo linako ukunyusa ngokukhawuleza iziphumo, le ntlawulo ayinayo imiphumo emibi. Le nxalenye yento eyenza ikhangeleke kakhulu kubadlali. Kwaye, njengoko siza kubona kwinqanaba elilandelayo, testolone inezinye izibonelelo ezongezelelweyo.
I-testolone powder yokuCheka
I-testolone powder iphelele ukusika ngenxa yokuba ikhuthaza ukulahlekelwa kweethambo ezinamafutha. Ukuphakama kwedoloji, amaninzi amaninzi onokulahlekelwa ngawo. Akuyi kukunika ilayisenisi yamahhala yokutya nayiphi na into oyifunayo kodwa ukuba uqeqeshiwe uza kubona iziphumo ezinkulu.
Kwakhona luncedo ngexesha lomjikelo wokusika xa ufumana ikhalori eyinqinci. Ngenxa yokuba i-Testolone powder yokusika iphinde ikhuthaze ukuzuza kweethambo, inokukunceda ukuba uxhomeke kwisisu sakho kwaye unciphise i-catabolism.
I-testolone powder ye-Bulking
Awuyi kukhetha i-Testolone powder njengobungqina bakho bokuqala njengoko kukho ezinye izidakamizwa ngaphandle apho zingcono ukongezelela ubunzima bobunzima.
I-testolone powder ayiyi kukunika amanzuzo amaninzi okanye ayikhukhumezi imisipha yakho, kodwa uya kufumanisa ukuba kukunceda ukupakisha imisipha ecocekileyo, kungekho mafutha athile. Le nto inokuba yinto ebalulekileyo kumjikelezo wokubhukuda, ukukunceda ukuqinisekisa ukuba ufumana ubunzima bezinga eliphezulu kwaye kungekhona nje amanzi.
Ukuhlaziywa kwePerolone powder
Ekugqibeleni, i-testolone powder, ngelixa isisongezelo esitsha kakhulu, sibonisa isithembiso esiphezulu sokusetyenziswa kwabasebenzi bomzimba kunye nabanye abadlali. Iimbonelo ezimbalwa zinikeza inhlanganisela yokuxhamla imisipha kunye nokungabikho kwemiphumo emibi eyenziwa yiSARM. Kodwa le ncediso ihlukile kwiSARM - nge-anabolic: i-androgenic ratio ye-90: i-1, le ncediso inika i-anabolic enokuthi ibe kufuphi neyo ye testosterone ngaphandle kweempembelelo ezingekho phantsi kweempembelelo ze-testosterone. Kusemthethweni ukuba uthenge kwaye akufuneki iicons. Yongeza kwiinzuzo zezempilo, kwaye uncediso olungavamile olungaphucula kuphela umzimba wakho, kodwa impilo yakho yonke. Ukuba unemibuzo emalunga nePerolone powder,
tags: bathenge iPololone powder, powderone eluhlaza, I-testolone powder
Thenga i-RAD140 powder online: Iifayili ze-8 kufanele wazi !!! Kuphi ukufumana umthengisi we-17-Methyltestosterone powder online?